Shiinaha oo u ballan qaaday Soomaaliya deeq wax barasho. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Shiinaha oo u ballan qaaday Soomaaliya deeq wax barasho.
Shiinaha oo u ballan qaaday Soomaaliya deeq wax barasho.
Muqdisho(SNTV) Safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Qin Jian oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in sanadki hore Dowladda Shiina deeq waxbarsho u fidisay arday gareeysa 51 arday,sanad kaana si lamid ah ay qorsheynayaan in tiro arday ah deeq waxbarasho ay siiso Dowladda Shiinaha.
Previous articleWaa tallaabo lagu hubinayo tirada iyo tayada Shaqaalaha.
Next articleWasiir Beyle” haddaan Gacmaha is qabsano guul intaan ka weyn ayaan gaari doonnaa”